Cad daabac leh Sheer Daahsoon - Qaabka Caleenta Ubaxa & Ilaalinta Asturnaanta 8348 daabacaadda daabacaadda, Shiinaha Qaab caleenta Sheer Daahsoon - Qaab caleenta ubaxa & ilaalinta asturnaanta daabacaadda daabacaadda, Soo-saareyaasha, Warshad - Zhejiang Rancho Santa Fe textile home Co., Ltd
Cadaan cad oo Dahab ah oo Daahsan Grommet - Qaabka Caleenta Ubaxa & Ilaalinta Asturnaanta 8348 daabac sheer
Number Model: 8348
SERVE WELL & NICE FABRIC ---- daah daahirka ah wuxuu leeyahay qaabab daahyo casri ah iyo noocyo casri ah oo leh midabyo aad u fiican. Daahyada waxay noqon kartaa qurxin wanaagsan oo lagu beddelo midabka qolka jiifka, qolka fadhiga, qolka carruurta, xannaanada ama xafiiska. Cuncun iyo iswaafajin, labadan daah ee daaqadaha ayaa leh qaabab kala duwan. Kudar qaab iyo waxtarka tamarta qol kasta oo guriga ku yaal. Qurxinta casriga ah waxaa lagu heli karaa cabbirro kala duwan oo aad jeclaan lahayd.
Daahyadaani waxay soo bandhigi karaan muuqaal casri ah oo casri ah, oo aan kaliya bixinaynin asturnaanta laakiin sidoo kale u oggolaanaysa iftiinka qorraxda ee jilicsan inuu si tartiib ah ugu qulqulo qol, qurxinta ugu fiican ee guriga, hudheelada iyo makhaayadaha, iwm. hawl badan oo ku filan qol kasta.
MIDABO KALA DUWAN
tayada-sare iyo adeegga macaamiisha weyn. Wax soo saarkayagu waxay la yimaadaan tayada ugu sareysa heerka leh qanacsanaanta macaamiisha 100%
Daboolka fadhiga Polyster
Isbadalka Jiilaalka Jaceylka tartiib tartiib ah ee ubaxa polyester 8368 daabac sheer